पाठकले जे भने पनि मलाई स्वीकार्य छ – समाश्री | साहित्य संसार
प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, कार्तिक ३०, २०७३
प्रकाशन मिति : मङ्गलबार, कार्तिक ३०, २०७३
साहित्यकार समाश्रीसँग कुराकानी
युवा पुस्ताकी प्रखर कवि समा श्रीको जन्म २०२४ साल बालाजुमा भएको हो । नेपाली साहित्यको मूलत काव्यिक विधामा कलम चलाउने समा श्रीका रचनाहरू विशेषगरी नारीप्रधान छन । प्रवासभूमि इजरायलबाट उनको वंशलोचन नामक कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छ । वौद्धिक धरातलको बलियो जगमा उभिएका उनका कविताहरूमा मानवीय संवेदना, नारी मनका पीडा, आक्रोशका अभिव्यक्तिहरू तथा हाम्रो परिवेश र समाजका विविध पक्षहरू कलात्मक शैलीमा प्रस्तुत भएका हुन्छन । विगत लामो समयदेखि इजरायलमा रहेर साहित्य सिर्जना गर्दै आएका साहित्यकार समाश्रीसँग साहित्यसंसारका लागि कृष्णपक्षले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ ।
१ साहित्यलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
साहित्य आफूले आफूलाई भित्री तवरबाट चिन्न, सुधार्न र अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो भन्ने मलाई लाग्दछ । साहित्यमा लाग्ने व्यक्ति आफू कहिले एक्लो हुन्न जस्तो लाग्छ |
२ साहित्यको कुन विधामा आफ्ना भावना अभिव्यक्त गर्न ज्यादा रुचाउनुहुन्छ ?
मलाई सबै विधामा रुचि छ र पढछु पनि । अभिव्यक्त गर्नलाई भने कविता नै मेरो पहिलो रोजाइमा पर्छ ।
३ कवितामा नै आफूलाई खुलेको महसुस गर्नुको कारण ?
सायद यसमा मलाई सरलताका साथ आफूलाई व्यक्त गर्न सजिलो भएर हो कि |
४ कस्तो बेलामा कविता जन्मन्छ ? सिर्जना फुर्ने कुनै विशेष अवस्था, समय, याम या मौसम छ कि ?
सिर्जना फुर्ने कुनै विशेष अवस्था, समय आदि त्यस्तो केही छैन । कुनै घटना या विषयले जब घोचेर सोच्न बाध्य बनाउँछ तब म घोत्लिन पुग्छु र त्यही घोत्ल्याइका विचारलाई कवितामा लेख्ने गर्छु ।
५ साहित्य कर्ममा समर्पित हुन्छु भनेर सानै देखि सोच्नुभएको थियो ? कहिले देखि पलायो यो सपना ?
समर्पित त साहित्यको रसस्वादन गर्न थालेदेखि नै हो, लेख्न भने धेरै पछि सुरु गरियो दुखको कुरा स्कुलको समयमा लेखिएको कुराहरूलाई त्यति जतन गरिएन |
६ तपाईँ आफ्नो सिर्जनाको ऊर्जा र प्रेरणाको श्रोत केलाई मान्नुहुन्छ ?
प्रकृति, मानवीय सम्वेदना र आफ्ना निजी विचारहरूलाई ।
७ तपाईँको रचनामा समाज, परिवेश या आफ्नै व्यक्तिगत भावना कुन बढी प्रतिविम्बित भएका हुन्छन् ?
तिनै कुरा ।
८ साहित्य सिर्जना केका लागि गर्नुहुन्छ ?
प्रथम त आफै रमाउन (आत्मसन्तुष्टि ) र दोस्रो विचार प्रवाह गरेर सोच परिवर्तनका लागि ।
९ साहित्य लेखनमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका र प्रभाव कस्तो छ ?
एकदमै राम्रो छ, सरल र सहज रूपमा प्रष्फुटन गर्ने माध्यम भएको छ । यसैको प्रभाव स्वरूप तत्कालैका प्रतिक्रिया, टिप्पणी र सुझावले लेखनमा सुधार आएको छ अँझै धेरै लेख्न हौसला पाएको छु ।
८ सामाजिक संजालहरूमा कविता बाहेक अन्य कस्ता कस्ता सामाग्री राख्न रुचाउनुहुन्छ ?
ज्ञानवर्धक, अनौठा र रोचक कुराहरूका साथै केही समसामयिक कुराहरू ।
१० लेखन बाहेक अरू केमा रुचि छ तपाईँको ?
मलाई विभिन्न बौद्धिक,आध्यात्मिक र ज्ञान गुणका कुराहरू सुन्न मन पर्छ त्यसैले म एक्लै हुँदा केही न केही सुनिरहेकै हुन्छु,गित सुन्न पनि औधि मन पर्छ |
११ अरूका साहित्यिक रचना र कृतिहरू कति पढ्नुहुन्छ ?
अवसर मिलेसम्म पढछु किनभने विचारको विभिन्नता यसैबाट प्राप्त हुन्छ ।
१२ समाज कस्तो साहित्यको अपेक्षा गर्छ ? कस्ता सिर्जना रुचाउछन अहिलेका पाठकहरू ?
समाज सदैव सामाजिक मान्यताहरूलाई सम्बोधन गर्ने र मार्गदर्शन दिने र सामाजिक कल्याणका निष्कर्ष निकाल्ने साहित्यको अपेक्षा राख्दछ । अहिलेका पाठकहरू निक्कै सजग र विद्वान छन्, त्यसैले पाठकहरू जीवनलाई परिस्कृत गर्ने खालका सन्देश मूलक सृजनाहरू नै बढी रुचाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दछ ।
१३ तपाईंचाहिं आफ्ना पाठकहरू कस्ता भै दिउन भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
हरेक लेखकलाई पाठकले आफ्ना रचना पढने मात्र होइन, त्यसमा व्यक्त गरिएको भाव या विचारलाई आत्मसात र अनुसरण गरुन भन्ने नै लाग्छ ।
१४ देशबाहिर रहनु भएका नेपालीहरूमा साहित्यिक अभिरुचि, लगाव र दृढता कस्तो पाउनु भएको छ ?
देश बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई समाजको यथार्थ चित्र देखाउने साहित्य नै हो त्यसैले आफूलाई अपडेट गर्न उनीहरू समयले भ्याएसम्म अभिरुचि राख्ने गरेको मैले पाएको छु । यसले उनीहरूलाई पनि प्रस्फुटित हुने प्रेरणा दिएको छ, यसैले लगाव राम्रै अवस्थामा छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
१५ प्रवासबाट साहित्य सिर्जना हुने क्रम बढिरहेको छ, नेपाली साहित्यले प्रवासबाट कस्ता साहित्यकार र सिर्जनाको अपेक्षा गरेको होला ?
प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले समयको पावन्दिका कारण भने जस्तो अध्ययन मनन, छलफल, विचार बिमर्श र समय सापेक्ष आफूलाई अपडेट गर्ने अवसर कम नै पाउँछन् । तथापि आफ्नो सीमित समयलाई सदुपयोग गरेर जे जस्ता सृजनाहरू गरेका छन्, तिनलाई कम आँक्नु हुँदैन, सहर्ष स्वीकार गर्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । यस्तो अवस्थामा नेपाली साहित्यले उनीहरूबाट अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि उनीहरूले दिएका कृतिहरू नै मूल्यवान हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दछ ।
१६ ’वंशलोचन’ले समाजलाई मुख्यत के दिन्छ, के छ यसभित्र ?
सर्वप्रथम त ‘वंशलोचन’ मेरो तेस्रो सन्तान हो म आफू खुसी जन्माएको त्यसैले पनि धेरै प्यारो लाग्छ |वंशलोचन भित्र मेरा विचार छन्, मनोभाव छन्, आस्था छन् र जीवनमा भोगेका र अध्ययन गरेर आफूलाई उचित लागेका सारा कुराहरू छन् । यसैले वंशलोचनले समाजलाई के दिन्छभन्दा पनि समाज या पाठकका लागि ती कुराहरू कति गुणग्राही भए त्यो नै मुख्य कुरा हो ।
१७ तपाईँका सिर्जनाहरू पढेर कुनै पाठकले नारीवादी कवि भनिदिंदा तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ ?
पाठकले छायावादी, प्रगतिवादी, समाजवादी या नारीवादी जे भने पनि मलाई स्वीकार्य छ ।
१८ अन्त्यमा मैले सोध्न बिर्सेका र यहाँलाई भन्न मन परेका केही छन् कि ?
म पाठकहरूका आशीर्वाद, स्नेह, र मायाको सदैव ऋणिरहने छु ।